२०७६ कार्तिक १२ गते मंगलबारको राशिफल – सजल सन्देश
२०७६ कार्तिक १२ गते मंगलबारको राशिफल
By Sajal sandesh	 On११ कार्तिक २०७६, सोमबार ११:३०
२०७६ कार्तिक १२ गते मंगलबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
किसानलाई जग्गा फिर्ता गर्नु पर्ने माग राख्दै सहकारीको जग्गामा विप्लवले झण्डा गाड्यो